रातो लगाउँदा झस्किने समाजमा बन्द कोठामै हराउँछ एकल महिलाको आवाज « नारी खबर >
रातो लगाउँदा झस्किने समाजमा बन्द कोठामै हराउँछ एकल महिलाको आवाज
पोखरा । द्वन्द्व प्रभावित एकल महिलाले व्यवस्था बदलिए पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्। मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेशले बुधबार आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि द्वन्द्व प्रभावित महिलाको पहुँच विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागी महिलाले न्याय पाउन नसकेको गुनासो राखे।
बागलुङकी द्वन्द्वपीडित जशोदा शर्माले विसं २०५८ मा बेपत्ता भएका श्रीमानको बाटो हेर्दाहेर्दै १९ वर्ष बिताएका भोगाइ पोखिन्। ‘राती कतै ढकढक आवाज सुन्दा पनि श्रीमान् नै आउनुभयो कि भन्ने हुन्छ, बेखबर श्रीमान्को सम्झनामा १९ वर्ष बित्यो, यथार्थ कहिले आउँछ ? भोग्नेको पीडा सुन्नेले अनुभूति गर्न सक्लान र ? उनले बेपत्ता परिवारको समस्याका लागि जुनै आयोग बने पनि पीडितलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरिन्।
नवलपुरकी द्वन्द्वपीडित एकल महिला अमृता सिग्देलले सत्य निरुपण आयोगले पीडितका आवाज सुन्न नसकेको बताईन्। नामका लागि गठन हुने र सेवा सुविधामा मात्र लिने आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो।
पर्वतकी द्वन्द्वपीडित एकल महिला मनरुपा शर्मा विसं २०६१ मा श्रीमान् मारिएको पीडा सुनाउँदै न्याय नपाएसम्म शान्तिको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुरा उठाउँदा शान्ति प्रक्रिया भत्किन्छ भन्ने मानसिकताले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको बताईन्।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले विगतको तुलनामा महिला सशक्त हुँदै अधिकारका लागि एकताबद्ध हुन थालेको जानकारी दिए। ‘हिजोभन्दा आज महिला एकताबद्ध भएर अधिकारका लागि आवाज उठाउनुभएको छ। अब आउने दिनमा अझै सशक्त हुनुहोस्’, उनले भने। महिलालाई राज्यले बिनाधितो १५ लाख रुपैयाँ ऋण सस्तो ब्याजमा दिएको उनले जानकारी दिँदै उद्यमशीलताको बाटोमा महिला आउने सके हिंसा र विभेदको अन्त्य हुँदै जाने बताए।
कार्यक्रममा सङ्कल्पका निर्वतमान क्षेत्रीय संयोजक दुर्गा न्यौपानले एकल महिलाले रातो लगाउँदा झस्किने समाज अहिले परिवर्तनउन्मुख हुँदै गएको धारणा राखे। उनले समातामूलक र न्यायिक समाजका लागि निरन्तर आवाज उठाएर समाजमा जकडिएका कथित मूल्य मान्यताको अवशेषलाई उखेलेर फाल्न एकल महिलाले आत्मबल बलियो बनाउनुपपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत टङ्क खनालले आत्मसम्मानपूर्वक बाच्ने मानवअधिकारमैत्री समाज निर्माणमा सबै जुट्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रमा एकल महिला समूह गण्डकीका अध्यक्ष प्रमिला तझ्याले एकल महिला सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सांस्कृतिक विविध हिंसा र विभेदमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई मनोपरामर्शसहित आत्मनिर्भर बनाउन सीपसँग जोडेर लाग्नुपर्ने बताईन्। उनले कोभिड–१९ का कारण सिर्जित अवस्थाले पनि एकल महिलाले थप समस्या झेल्नुपरेको बताइन्।
समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले एकल महिलाको अवस्था बदल्न समूहले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिईन्। इन्सेक गण्डकीका कार्यक्रम संयोजक सवनम शर्माले द्वन्द्व प्रभावित महिला र एकल महिलाका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि द्वन्द्व प्रभावित महिलाको पहुँच विषयमा अहिलेसम्म भएका अभ्यासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। रासस